Izingubo ezijwayelekile zase-Italy zinikeza ugqozi oluhle | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | General, Italia
I-Los imvunulo ejwayelekile yezwe ngalinye Akhethwe ngokuya ngamasiko, umlando kanye nezikhathi zobukhazikhazi bendawo ngayinye. Lezi zingubo ziyingxenye yesiko lezwe ngalinye futhi yize zingasetshenziswa namuhla, zisewuphawu lwazo zonke izakhamizi zezwe. Uphawu abalukhipha ngezikhathi ezikhethekile njengamaholide abalulekile.
I-Italy izwe elihle futhi likhulu ngempela, ngakho-ke kungahle kube nokuhumusha okwehlukile kokuthi imvunulo ejwayelekile yase-Italy. Amasiko nokugqoka kuguquka kusuka enyakatho kuye eningizimu ngakho-ke sizozama ukufanekisa kancane le sethi yemvunulo ebonakala ifana ne-Italy.
1 Ukusetshenziswa kwezingubo ezijwayelekile
2 Imvunulo ejwayelekile yase-Italy
3 Ukuvuselelwa kabusha e-Italy
4 Isikhathi esidlule samaRoma
5 Izingubo zokugqoka zaseSardinia
Ukusetshenziswa kwezingubo ezijwayelekile
Izambatho ezijwayelekile zikhuthazwa izinkumbulo zasendulo zezikhathi lapho amazwe ayephila khona isikhathi sobukhazikhazi. La masudi angakwazi unazo zonke izinhlobo zamathonya futhi empeleni amasudi ase-Italy agcina ukufana okuthile namaJalimane. Lezi yizembatho ezivame ukukhuthazwa yiNkathi Ephakathi noma ngezikhathi lapho bekungekho ukuthonya komhlaba wonke kwezemfashini, ngakho konke bekuyiqiniso kakhulu. Ngokuqondene nokusetshenziswa kwalezi zingubo, zivame ukukhishwa emikhosini yezintshisekelo zesifunda noma zikazwelonke. Izikhathi lapho isifunda ngasinye sinemigubho yokukhumbula amasiko namasiko aso, yingakho imvunulo ibaluleke kakhulu njengengxenye eyodwa yomkhosi.
Imvunulo ejwayelekile yase-Italy
Imvunulo engabhekwa njengejwayelekile e-Italy iqukethe i- isiketi ngepitikoti nesiphinifa. Kuyingubo efakiwe enevesti nehembe elimhlophe ngaphezulu. Ngaphezu kwalokho, isigqoko sekhanda noma iveli phezu kwezinwele kuvame kakhulu emikhosini yase-Italy, akumele sikhohlwe ukubaluleka kobuKatolika kulelizwe. Namuhla ungabona imvunulo eminingi efana nalena, ephefumulelwe yizikhathi zasendulo, noma ngabe ngokwemvunulo ejwayelekile kunezifunda ezibonisa okwehluke kakhulu futhi okhethekile.
Ukuvuselelwa kabusha e-Italy
Esinye sezikhathi ezihlonishwa kakhulu ku- I-Italy yi-Renaissance, lapho kwaba khona umzuzu wobukhazikhazi. Ngaphezu kwalokho, izingubo nezingubo zale nkathi zinekhwalithi yokuba zinhle kakhulu futhi zinabile. Amasudi aphefumulelwe ngalesi sikhathi ngokuvamile ayabiza, ngoba sikhuluma ngamaleyisi nama-brocade okwenza izingubo ngezingqimba nemininingwane eminingi. Lezi zingubo zivame ukusetshenziswa emikhosini enikelwe eNkathini Ephakathi nasekubuyiseni izinkathi ezidlule. Zisetshenziselwa kabanzi imikhosi yeCarnival, ikakhulukazi eVenice.
Isikhathi esidlule samaRoma
Wonke umuntu uyazi izikhathi zamaRoma nobuhle bazo amasudi enziwe ngezindwangu ezimhlophe. Yizingubo zokugqoka namuhla esezivele ziyingxenye yesiko elidumile nokuthi wonke umuntu uzisebenzisile njengezimpahla ezijwayelekile zaseRoma, kepha akumele sikhohlwe ukuthi nazo ziyingxenye yesiko nomlando wase-Italy. Ngakho-ke zingathathwa njengezinye izingubo ezijwayelekile eziphefumulelwe uMbuso WaseRoma.
Izingubo zokugqoka zaseSardinia
Esiqhingini saseSardinia banemininingwane ehlukile yamasiko futhi ezingutsheni singabona eyodwa yazo. La masudi enziwe ngezindwangu ezinde nezibanzi lapho kunezingqimba eziningana. Izigqoko zekhanda namaveli kusetshenziswa ekhanda ngezindwangu eziwugqinsi nezintambo, ezingqimbeni eziningana futhi. Kujwayelekile ukubona izindwangu ezifekethisiwe zegolide futhi ngemibala efana nokubomvu noma okuluhlaza okotshani. Ngokuqondene nabo, ihembe elimhlophe elinemikhono emhlophe lapho kugqokwe ivesti kuyinto ejwayelekile.
Kubaluleke kakhulu maqondana ne- imvunulo ejwayelekile yimikhosi yaseVenice, ezidume umhlaba wonke. Kulokhu, zigqugquzelwa imvunulo enhle yoKuvuselelwa lapho zingashisi uma kukhulunywa ngokukhombisa izindwangu nemininingwane kanokusho. AmaBrocade, usilika kanye ne-satin kuyingxenye yala masudi amahle. Iziketi zinevolumu eningi namapitikoti. Phezulu ama-bodices alungisa ukukhombisa okhalweni. Amasudi angahlotshiswa ngazo zonke izinhlobo zemininingwane, kusuka ku-lace kuya kuzimpaphe ezinemibala. Uma kukhulunywa ngeCarnival, awukho umthetho wokugqoka olandelwa ngokuqinile, kuphela ukukhuthazwa kwe-Renaissance okugcwele yonke into. Phezulu kungenzeka ukubona izembozo noma izigqoko ezinomphetho obanzi. Kepha uma kukhona okuthile okufanele kuhambisane nalezi zingubo, kuyizimaski zomkhosi waseVenice, esezivele zidumile emhlabeni wonke. La maski ahlala efanelana nesudi ngokombala futhi imvamisa ahlotshiswa ngobuhle, upende onemibala neminye imininingwane engeza ukunethezeka okuthe xaxa kusudi yonke. Kanye nalezi zingubo ungabona nezinye izesekeli, ezifana nabalandeli abagcwele ubuhlalu nezimpaphe noma amagilavu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Izingubo ezijwayelekile zase-Italy
Yini ongayibona eLos Angeles
ICala Turqueta, ikona elihle eMenorca